मेयर राणाको प्रतिक्रिया,–‘भ्रममा नपरौं, त्रिभुवन सरकारको इतिहास मेटिदैन’ - Arthapage
मेयर राणाको प्रतिक्रिया,–‘भ्रममा नपरौं, त्रिभुवन सरकारको इतिहास मेटिदैन’
प्रकाशित मितिः २७ चैत्र २०७५, बुधबार ०७:४४ April 10, 2019
नेपालगन्ज,२७, चैत : नेपालगञ्जको त्रिभुवनचोक बिवाद प्रकरणमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमसेर राणाले ‘त्रिभुवन सरकारको इतिहास मेटाउन नखोजेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वीकृतीमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले समन्वय गरी चोक पुर्ननिर्माणको काम सुरु गरिएपछि बिवाद भएको छ ।
शुरुदेखि नै राजनीतिक कोपभाजनमा परेको त्रिभुवनचोक अचानक पुर्ननिर्माण गर्न भन्दै रातारात भत्काएको भन्दै आफुनुकुल हुने गरी आक्रोस पोख्न शुरु गरिएको छ । आक्रोसको मुख्य तारो मेयर राणा र संघका अध्यक्ष बैश्य रहेका छन् । त्रिभुवनकै शालिक पुर्नस्थापना गर्नुपर्नेदेखि कमल मधेसीचोक राख्नुपर्ने जस्ता मागहरु फेरि ब्युतिन थालिएको छ । मधेस केन्द्रीत दलले कमल मधेसीचोक बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
यसैबीच सामाजिक सन्जालमा त्रिभुवनचोक बिबादका बिषयमा प्रतिक्रिया दिदै मेयर राणाले ,–‘त्रिभुवन सरकारको इतिहास मेटिदैन, भ्रममा नपरौ भनेका छन् । त्रिभुवनको शालिक २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि भत्काइएको हो । राम्रो काम गर्न लागेपनि रातीको समयमा पुर्व जानकारी नदिई काम सुरु गर्न लाग्दा स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएको पाइएको छ ।
त्रिभुवनचोकमा सडक बिस्तार भई फराकिलो भएपछि चोकको सौन्दर्यकरणका लागि नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य सङ्घले कारकादौं चोकमा घण्टाघरसहित त्रिभुवनचोक निर्माणका लागि मङ्सिर १३ गते डिजाईन नक्सा सहित सहमति माग गरेको हो । शालिक भत्काइएपछि चोकमा लामो समयसम्म राष्ट्रिय झण्डा राखिएको थियो । सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको समन्वयमा त्रिशक्ती सिमेन्टले दुबै स्थानमा निर्माणको जिम्मा लिएको हो । मङ्सिर १८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले निर्माणाधिन स्तम्भमा प्रतिमा राख्ने ठाउँ छोडेर अन्य निर्माण कार्य गर्न सङ्घलाई सहमती दिने निर्णय गरेको छ । तर त्यसरी निर्माण गर्दा वडाका जनप्रतिनिधी, वडाबासी सहित वडाबाट सिफारिस भई आएमा मात्र सहमती दिने सर्त समेत राखिएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष बैश्यले नेपालगञ्जका मेयर राणाको प्रस्तावमा आफुहरुले डिजाईनसहितको नक्सा लिएर उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको बताए । उनले निर्माण थाल्नु भन्दा अगाडी डिजाईन नक्सा सार्वजनिक नगर्दा अन्यौलता भएको देखिएको बताए । चोकमा स्तम्भ बनाएर राष्ट्रिय झण्डा राख्ने र हाईमाष्ट लाईट राख्ने योजना रहेको बैश्यको भनाई छ । चौकको नयाँ नामाकरण गर्ने वा कसैको इतिहास मेटाउने उद्धेश्य नभएको उनले बताए। स्थानीयबाट विरोध भएपनि उपमहानगरपालिकाको नयाँ निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको अध्यक्ष बैश्यले बताए ।
प्रकाशित मितिः २७ चैत्र २०७५, बुधबार ०७:४४ |
Prevआठौं राष्ट्रिय खेलकुदका पाँच खेल बुधवारदेखि
Nextबैंकबाट कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्